သွေးတိုးခြင်းက ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသလား ? - Hello Sayarwon
သွေးတိုးကြောင့် ခေါင်းကိုက်စေတယ်လို့ တွေးရတာလွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေသင်တွေးမယ်။“နှလုံးကအရမ်းခုန်တာကြောင့် သွေးက သွေးကြောနံရံတွေကိုအားနဲ့တွန်းပြီးစီးဆင်းသွားတယ်။ ဒါကြောင့် ငါ့ဦးခေါင်းခွံကပါလိုက်ခုန်လာတာများလား” ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဆက်စပ်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့ အဖြေကမသေချာပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေမှာတော့ ခေါင်းကိုက်နဲ့ သွေးတိုးဆက်စပ်မှုကိုအနည်းငယ် တွေ့ရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်ကလူတွေဟာ ခေါင်းကိုက်တာက သွေးတိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ယုံခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လေ့လာမှုတွေအရ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ သွေးတိုးတာကသိသာတဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ယနေ့ခေတ်ရဲ့လူတော်တော်များများနဲ့ဆရာဝန်တွေကပါခေါင်းကိုက်တာက သွေးတိုးရှိလို့ဆိုပြီးထင်နေကြတုန်းပါဘဲ။
အာရုံကြောဆရာဝန် Deborah Friedman ကခုနကပြောသွားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းပြချက်တွေပေးထားပါတယ်။
• ခေါင်းကိုက်ခြင်းက တချို့သွေးတိုးကျဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်လည်းဖြစ် နိုင်တယ်။
• ပြောင်းပြန်အားဖြင့် သွေးတိုးကျဆေးများသည် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ကာကွယ်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်လည်းဆေးကုသမှု ခံယူနေသောသွေးတိုးလူနာများတွင် ခေါင်းကိုက် ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါတယ်။
ခေါင်းနည်းနည်းပဲကိုက်တဲ့ သွေးတိုးဝေဒနာရှင်တွေဘာလို့ရှိနေတာလဲ ?
နော်ဝေမှာရှိတဲ့ လေ့လာမှုတွေကသွေးတိုးရှိတဲ့ ဒေသခံတွေက ခေါင်းသိပ်မကိုက်ကြဘူးလိုပြောပါတယ်။ လေ့လာမှုအဖွဲ့သားတွေကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၂၂၀၀၀ခန့်ကို၁၁နှစ်ခြားပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်သွေး(Systolic blood pressure) ၁၅၀အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေကခေါင်းကိုက်နိုင်ချေ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပိုနည်းပါတယ်။ အပေါ်သွေး(Systolic figure)ဆိုတာက သွေးတိုးတိုင်းရာမှာအမြင့်ဆုံးဂဏန်းကိုဆိုလိုတာပါ။ လေ့လာသူတွေကလည်းhypalgesia (နာကျင်မှုကိုအာရုံခံစားနိုင်စွမ်းလျော့ခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးအဖြေထပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Malignant hypertension (ပြင်းထန်တဲ့သွေးတိုး) ဆိုတာဘာလဲ ?
တကယ်လို့သင်ဟာMalignant hypertension ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်မှာအမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ သွေးတိုးမျိုးကရုတ်တရက်မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်လာတတ်ပြီး သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေရဲ့တစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာဖြစ်တာပါ။
Malignant hypertension ကငယ်ရွယ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာအဖြစ်များပြီးအထူးသဖြင့်အာဖရိကန်-အမေရိကန်စပ်ယောက်ျားလေးတွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်နေသူတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်အဆိပ်သင့်နေသူတွေမှာပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Malignant hypertension ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကအမြင်အာရုံဝေဝါးလာခြင်း၊စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲလာခြင်းတို့ဖြစ်တဲ့အပြင်မအီမလည်ဖြစ်ခြင်း၊အသက်ရှူကြပ်ခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Malignant hypertension ကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးသွားပြီးလိုအပ်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
သင်ဘာကို မှတ်ထားသင့်သလဲ ?
နောက်ဆုံးလေ့လာချက်တွေအရဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်း(tension headache) သည် သွေးတိုးနဲဆက်စပ်မှုရှိသည်ဆိုရင်တောင် အနည်းငယ်သာဆက်စပ်ပါသည်။ သွေးတိုးရှိနိုင်ချေသိပ်မရှိပါ။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ (Migraine)နဲ့ သွေးတိုးတွေကအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၁၀ရာခိင်နှုန်းကနေ၂၂ရာခိုင်နှုန်းအထိသက်ရောက်စေတဲ့အဖြစ်များသောအခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေအားလုံးရဲ့၃ ရာခိုင်နှုန်းကဒီအခြေအနေနှစ်ရပ်လုံးရှိနေနိုင်ပါတယ်။
Malignant Hypertension(ပြင်းထန်တဲ့သွေးတိုး)မှလွဲပြီးတခြားအခြေအနေများတွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် သွေးတိုးကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့ ယုံကြည်အားထားရတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ သွေးပေါင်ချိန်မှန်မှန်တိုင်းတာပါပဲ။
Friedman, D. (2002). Headache and hypertension: refuting the myth. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 72, 431.
Hagen, K. et al. (2002, April). and risk of headache and Blood pressure:aprospective study of 22,685 adults in Norway. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 72(4),
Janeway, Theodore. (2006). Excerpt from Theodore Janeway’s study of high blood pressure and headaches, Clinical Study of Hypertension. Harvard Health Letter.
Malignant hypertension. (2011, April 1). National Institutes of Health.
Prutkin, Jordan M. (2007). Theodore Caldwell Janeway, Clinician and Pathophysiologist.Clinical Cardiology, 30, 146-148.
What are the Symptoms of High Blood Pressure? (2011, April 4). American Heart Association.
osisMonitoringofHighBloodPressure/What-are- the-Symptoms- of-High- Blood-Pressure_UCM_301871_Article.jsp
Yeung, Albert. (2006, June). What Is the Connection Between Hypertension, Headache and Migraine? Hypertension Canada, 87.
သွေးတိုးရောဂါအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ဂရုစိုက်မှုများ